नेप्सेमा २१ अङ्कको वृद्धि « रिपोर्टर्स नेपाल
प्रकाशित मिति : 2020 February 2, 4:23 pm
काठमाडौँ, १९ माघ : धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक उकालो लागेको छ । उकालोको यात्रामा रहेको नेप्सेले नयाँ यात्रा तय गरेको हो । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार नेप्से परिसूचक आज २१.२६ ले बढेर एक हजार ३४६.६४ मा पुगेको हो । यस्तै सेन्सेटिभ परिसूचकसमेत ४.९९ विन्दुले बढेर २८६.७५ मा पुगेको छ ।
नेप्सेले उकालो यात्रा तय गर्दा कारोवार रकम भने रु दुई अर्ब माथि नाघेको । कूल १७५ कम्पनीका ५३ लाख ४६ हजार ५०८ कित्ता शेयर रु दुई अर्ब सात करोड ७९ लाख ८७ हजार ७९९ मूल्यमा खरीद बिक्री भए ।
नबिल बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा ढुङ्गाना
काठमाडौं, १० जेठ । नबिल बैंकले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा ज्ञानेन्द्र प्रसाद ढुङ्गानालाई नियुक्त गरेको छ
अपर हेवाखोलाको आईपिओ आजदेखि
काठमाडौं, जेठ १० । अपर हेवाखोला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले आजदेखि पहिलो चरणको आईपिओ बिक्रि खुला
सुनको भाउ ३ दिनदेखि स्थिर
काठमाडौं, जेठ १० । आइतबार र सोमबार तोलाको ९८ हजार रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाला सुनको
काठमाडौं, १० जेठ । नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुसार आज एक अमेरिकी डलरको खरिददर १२३ रुपैयाँ
महँगीले सबैको भान्सामा असर गरेको छ, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम निबन्ध पढेजस्तो नहोस्ः पूर्व गभर्नर
काठमाडौं, १० जेठ । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले सरकारको नीति तथा
अर्थतन्त्रमा जादुगरी सुधार हुन सक्दैनः अर्थशास्त्री
काठमाडौं, १० जेठ । अर्थशास्त्री डा. चन्द्रमणि अधिकारीले आज सार्वजनिक हुन लागेको सरकारको नीति तथा